San Htun's Diary: နိုင်အာဂရာသွား တောလား...
I am glad that you hadanice trip with your loving friends.
Looking forward to reading new new "taw lar".
Nigara legends of Adventure Theater အတွက်
အာချားဟဲတွေ သားသမီးမြေးမြစ်ဆွေမျိုး ၇ ဆက်နဲ့ လာကြတယ်လေ..အဟီး၊
သူတို့ နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်
နိုင်ဂါရာတောလားမှာ သက်တံနဲ့ဆုံခဲ့တော့ အလှပေါ် အယဉ်ဆင့်သွားတာပေါ့...။ စန်းထွန်းခရီးများများသွားပါ။ ဒါမှ စာဖတ်သူတွေ ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ နေရာအစုံရောက်ဖူးရတယ်..။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ဒီလို ခရီးသွားနိုင်ဖို့ အမြဲ ပါရမီဖြည့်ပေးပါလို့ စန်းထွန်းကနေတဆင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်..:)
Goldfish Lay said...
I am glad you don't go with the tour bus. Driving for7hours isapain but you get freedom on visiting. How was the weather there? It was cold and raining here in NY. :)
Ko Tun Tun Win, weather is sunny but cool for me but Andrew doesn't. But at night he also felt cool.